WAA WAX AAN LA AQBALI KARIN DHIIG BAXA CEEL- AFWEYN – hogaanka.org
Waxaa culays ku tahay dhaqaalaha dalka waayo
Gurmadka iyo kala dhexgalka dadkaasi waxaa ku baxa malaayin lacag ah oo culeys ku ah qaranka
Waxaa ku dhinta ama ku dhaawacma ciidamada nabadgelyada qaranka ee gurmadka u gala kala badbaadinta dadkan caadeystey daadinta dhiigooda iyo dhiiga samafalayaasha qaranka.
Waxaa ku baxa kharashyo badan oo toos iyo kuwo dadban oo gudiyada,iyo dadka samafalayaalka ah ee dawladu magacowdo ama iskood isku xilqaama ka baxa
Waxay abuuraan bara kac dad iyo deegaan.
Waxay ceeb ku tahay beelaha dagaalamaya waayo
Waxaa wax laga xishoodo ah in ay beelo walaalo ah oo isku dhiig,dhalasho,degaan,xidid iyo xigaal ahi oo weliba Allah(swt) aqaan ahi u badheedhaan daadinta dhiigooda iyo fidmeynta degaano nabad ah
Waxaa ku dhinta oo ku dhaawacma dad balse wax lagu kala guuleystaa ma jirto oo marka la soo gaba gabeeyo shaqaaqada degaanka,dadku waa walaalihii wax lagu kala guuleystey,wax laysku hayey,wax laga faa’iiday midna ma jirto balse waxaa la daadiyey dhiig waxaa ku dhintey dad qarankan wax ka horumarin lahaa waxaa ka abuur ma caruur agoon ah,dad naafo ah iwm taasina waxay ku tuseysaa heerka doqonimada ee dagaaladaasi oo u muuqda uun dad kibir ama maangaabnimo uun caadeystey .Dawlada waxaa kula talinayaa:
In si cilmiyeysan oo mugleh loo darso sababaha ka dambeeya dagaaladan soo noqnoda lana raadiyo,derso,baadho natiijada ka soo baxdana lagu daweeyo dhibta jirta.
In dhamaan kharashyada ku baxa hawlahan ee nafyo maalba leh dusha loo saaro oo ay bixiyaan dhib wadashaashu, lana ganaaxo,la ciqaabo dadka hogaamiya,abaabula dagaalada ku dhisan beelaha.
In lagu xukumo beelaha in ay bixiyaa dhaqalaha ku baxa caruurta iyo marwooyinkii ay ka tegeen ciidamada nabadgelya,qaranka,iyo hayadaha kale ee ku nafwaayey kala badbaadinta beelahan qooqa iyo kibirka ku dagaalamaya.
In cidkasta oo gacan ka geysatada abaabulka dagaalada noocan ah la diiwan geliyo mustacbalkana lagula xisaabtamo wixii uu dembi galey si ay u saameyso mustaqbalka xilalka qaran,shaqooyinka dawladada ee mustaqbalka.Waad Mahadsantihiin dhamaantiin
WHAT DOES THE QURAN SAY ABOUT JUDGING OTHERS? Previous
Talo waa mar aad haysid balse aad ka gaabisid iyo mar ay ku dhaafto oo daba guclayso Next